Tue, Jul 7, 2020 at 9:34pm
मंगलवार, जेष्ठ १८, २०७३ साल
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेको कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले सरकारले किसान पेन्सनको योजनालाई बजेटमा समावेश नगरेर बजेटलाई अपाङ बनाएको गुनासो गरेका छन् । राजधानीमा मंगलबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रिकरण गर्ने कुरा किसानमा उत्साह नजगाएसम्म कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । गजुरेलले भने, ‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रिकरण गर्ने कुरा किसानमा उत्साह नजगाएसम्म..
सोमबार, जेष्ठ १७, २०७३ साल
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शनिबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले खुलेर समर्थन नगरे पनि सावधानीपूर्ण समर्थन जनाउदै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । यस्तो छ प्रतिक्रियाः नेपाल उद्योग परिसंघ आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सुन्दा लोकप्रिय र विश्लेषण गर्दा महत्वाकांक्षी लाग्ने कार्यक्रम र सोही अनुरुपको अनुमानित खर्च विवरण यस बजेटका आकर्षण हुन् । यद्यपी यस बजेटका आफ्नै सकारात्मक..
काठमाडौँ। सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुबीच सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा व्यवस्थापिका–संसद्मा मिलेर विपक्षीको सामना गर्ने सहमति भएको छ । एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली र केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आज प्रम निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नयाँ बजेटले जनतामा नयाँ उत्साह ल्याएको हुँदा बजेटको कार्यान्वयनमा कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले..
काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रोपटक बसेको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण पुनः स्थगित भएको छ । आधा घन्टाका लागि स्थगित भएको सदनको बैठक दोस्रोपटक सुरु भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई बोल्न दिए । उनले बजेटका महत्वपूर्ण जानकारी पत्रपत्रिकामा पुगेका कारण सेयर बजारमा असर परेको भन्दै सो विषय गम्भीर अपराध भएको बताए । व्यवस्थापिका–संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय रहेको बजेटअगावै..
आईतवार, जेष्ठ १६, २०७३ साल
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारुढ एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले कर्मचारीको तलव बृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिबाहेक बजेटमा आएका सबै विषय मुलुकको आवश्यकता भएको दावी गरेका छन । रिपोर्टर्स क्लबमा आइतवार उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संविधानको कार्यान्वयन, नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्ने र संविधान जारी भएपछि बढेको जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक भएको तर्क गर्दै बजेटलाई बाध्यात्मक..
काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका प्रत्येक चुनौतिको सामना गर्न आफूहरु तयारीका लागि प्रस्तुत भएका बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे खर्ब रुपियाँको जम्बो बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट आइतबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले बजेट कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौति रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई किनारा लगाउन आफूहरुसँग संकल्प, आत्मविश्वास र योजना रहेको दावी गरे । उनले भने– कार्यान्वयनमा चुनौतिहरु छन् ।..
काठमाडौं । सरकारले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र सकारात्मक नै देखिए पनि केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरु भने यसको कार्यान्वयन प्रश्न उठाइरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको साढे दश खर्बको बजेट सस्तो लोकप्रियतामूखी र बितरणमूखी रहेको उनीहरु बताउँछन । यो बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्दैनः महत पूर्वअर्थमन्त्री एवं काँग्रेस नेता रामशरण महत जनतालाई पपुलर कुरा गरेर खुशी पार्न..
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात ५८ दशमलव नौ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात २९ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक..
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा छ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र सात दशमलव पाँच प्रतिशतमा महंगी कायम राखिने बताएको छ । कर्मचारीको उच्च तलव वृद्धि गरेको सरकारको सात दशमलव पाँच प्रतिशतमा महंगी नियन्त्रण गर्ने आशा पूरा हुन निकै कठिन छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले यो बजेट आर्थिक विकासको प्रस्थन विन्दु हुने दावी गरे । उनले चार लाख नयाँ..
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेको छ । विगत तीन वर्षदेखि तलव वृद्धि नभएका कर्मचारीहरुलाई यस पटक भारी तलव वृद्धि गरिएको हो । त्यसबाहेक उनीहरुलाई एक दिनको तलव बराबर बार्षिक ग्रेड तथा विगतमा दिइएको महंगी भक्तालाई यथावत राखिएको छ । यसले कर्मचारीहरुको मुहारमा खुशी ल्याए पनि यसैका नाममा बजारमा चर्को महंगी बढाइने छ । यसबाट मुख्य गरेर..
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शनिबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस्तो निर्णय गरेको हो । ठूला भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी गर्न भन्दै सरकारले यस्तो बैंकको कल्पना गरिएको हो । अर्थमन्त्रीले यसअघि नै यस्तो बैंकको स्थापनाका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताउँदै आएका थिए । ..
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चाको रुममा मात्रै रहँदै आएको मेट्रो रेलको कल्पना आउँदो आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने सरकारले योजना अघि सारेको हो । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्काल काठमाडौँमा मेट्रो रेल निर्माणको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाउने बताए । पौडेलले पानी जहाज..
काठमाडौं । सरकारले सरकारी स्वामित्वको विमान सेवा प्रदायक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा दुई वटा वाइड बडी जहाज ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई वटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने जनाइएको हो । दुई वर्षअघि मात्रै दुईवटा न्यारो बडी एयरबस खरिद गरेको निगमले अब नयाँ संरचनासहित वाइड बडी..
काठमाडौं । निकै वर्षदेखि चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खण्डिकरण आगामी आर्थिक वर्षको कार्यान्वयन हुने संभावना देखिएको छ । सरकारले शनिबार संसदमा प्र्रस्तुत गरेको बजेटमा प्राधिकरणलाई तीन टुक्रामा खण्डीकरण गर्ने जनाइएको छ । प्राधिकरण खण्डीकरण गरी उत्पादन, वितरण र प्रसारणको तीनवटा संस्थान बनाइने छ । प्राधिकरण एउटैले तीनवटै काम गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई खण्डीकरण गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आए पनि प्राधिकरणभित्रका..
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंदेखि निजगढसम्मको द्रुतमार्ग निर्माण गर्न १० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बहुचर्चित यस आयोजना यसअघि भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी भए पनि वर्तमान सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको विनियोजन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा नौ अर्ब रुपियाँले बढी हो । २०६६ कात्तिकमा शिलान्यास भइसकेको यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै प्राथमिकतामा राखिए पनि राजनीतिक..
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा थप कर लगाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाएर जलविद्युतमा लगानी गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । नेपाल आयल निगमले संचित ऋण चुक्ता गर्ने क्रममा रहेको बेला त्यसमा थप कर लगाएर रकम जुटाउने नीति अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले संसदमा बुधबार प्रस्तुत बजेटमा प्रस्तुत गरेका हुन । यसरी संकलित रकम जलाशययुक्त बुढी..
बजेट प्रस्तुती आज, जम्बो र 'पपुलिष्ट' बजेट ल्याउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले चोतर्फी सुझाव र आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै १० खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको जम्बो बजेट आज शनिबार संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । विशेषगरि पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नभइसकेको अवस्थामा यो सरकारले पनि जम्बो बजेट ल्याउन लागेको हो । पछिल्लो समयमा राजश्व संकलनमा भएको उल्लेख्य वृद्धिबाट उत्साहित भएर सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो । विपक्षीदेखि आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले..
बजेट पास भएपछि काँग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छः भरतमोहन
बिहिवार, जेष्ठ १३, २०७३ साल
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवम एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले पार्टीले २०५१ सालमा नौ महिने शासन कालमा आफूले ल्याएको बजेटको झल्को दिने गरी अहिलेको सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन । राजधानीमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘नौ महिने शासनकालमा मैले ल्याएको बृद्ध भत्ता, आफ्नो गाँउ आफै बनाउ भन्ने कार्यक्रमलाई रामशरण महतसहित अहिलेसम्मका सबै अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिएर स्वीकार गरिसकेका छन । त्यसैले अहिलेको बजेट..
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकताः योजना आयोग
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगकी सदस्य सुमित्रा अमात्यले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, सडक, रेल र यातायात व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै पूर्वाधार नै विकासको आधार भएकाले पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन । पूर्वाधारको निर्माण सुरक्षित र वातावरणमैत्री हुने आयोगले जनाएको छ । संरचनागत क्षमता सुधारमा बजेटले प्राथमिकता दिने भन्दै..
बजेटका विषयमा पूर्वमन्त्रीदेखि उद्योगपतिसम्म के भन्छन ?
बुधबार, जेष्ठ १२, २०७३ साल
काठमाडौं । काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले सरकारको आगामि बजेट दिर्घकालमा मुलुक र जनताको हित नगर्ने खाले कार्यकर्तालाई रकम बाड्ने गरी वितरणमुखी आउने दावी गरेका छन । रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार उनले प्रधानमन्त्रीले बोले जस्तो यो बोल्ने बजेट आउँछ । धेरै सपनाहरु बाडिन्छ । बजेटबाट खासै आशा छैन भन्दै सपना बाडिन्छ र अर्थतन्त्रलाई धारासायी बनाइन्छ भने । यसले कार्यकर्ताको तत्कालिन महत्वकांक्षा त पूरा..
बजेट आउन सातादिन मात्रै रहंदा सरकार भने अझै सिलिङ्ग हेरफेरकै तयारीमा
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति सात दिन मात्रै बाँकी छंदा सरकार भने अझै बजेटको सीमा (सिलिङ) हेरफेर गर्ने कसरतमै रुमलिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल दलीय भागबन्डा मिलाउन तथा केही ठूला आयोजनामा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने कारणले बजेटको सिलिङ परिवर्तन गर्न सरकारमाथि दबाब परिरेहेको बताइएको छ । सरकारले आफू अनुकूलका केही नयाँ कार्यक्रम र आफंैले बनाउने..
अर्थमन्त्री भन्छन– समाजबाद उन्मुख बजेट आउँछ, विज्ञहरु भन्छन्ः कार्यान्वयन हुने ल्याउ
मंगलवार, जेष्ठ ४, २०७३ साल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संमृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख बजेट ल्याउने बताएका छन् । उनले अनुत्तरदायी बजेट नल्याउने दाबी पनि गरे । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार राजधानीमा गरेको पूर्वबजेट छलफलमा पौडेलले संविधान, संघीयता कार्यान्वयन र नयाँ चरणको आर्थिक विकासका साथै रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, कृषि तथा ऊर्जा विकासमा बजेट केन्द्रीत गर्न सुझाव आएको बताए । उनले आएका उपयुक्त र मूल्यवान सुझावलाई..
कार्यान्वयन नहुने 'पपुलिष्ट' बजेट नल्याउः अर्थविद्
सोमबार, जेष्ठ ३, २०७३ साल
काठमाडौं । अर्थविदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट आए त्यो कार्यान्वयन हुन नसकि अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन । रिपोर्टर्स क्लबमा सोमबार अर्थसचिव समेत रहिसकेका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले खर्च गर्न सक्ने क्षमता र संरचनाको हिसावमा मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आए त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हैसियत अनुसारको कार्यान्वयन..
निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझायो सुझावको ठेली, अर्थमन्त्री भन्छनः विश्वास टुटन दिन्नौं
काठमाडौं । आसन्न बजेटमा लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझावको लामो ठेली अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई बुझाएको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघसहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल सीमापार व्यापार संघले एकै कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव सुझाएको हो । उद्योगीहरुको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले पनि यसअघि छुट्टै कार्यक्रमसाथ सुझाव दिइसकेको छ । निजी क्षेत्रले प्रत्येक वर्ष बजेटको मुखमा..
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: ऊर्जामा पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
सोमबार, बैशाख २७, २०७३ साल
काठमाडौँ। सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनामा समावेश गरिएका विषय वस्तुलाई नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर योजनालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ । दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ श्वेतपत्रमा समेत समावेश गरिएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि अगाडि सारिएका विभिन्न विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा विद्युत्भार..
सांसदहरूको सुझावः कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउ हाम्रो सुविधा पनि बढाउ
आईतवार, बैशाख २६, २०७३ साल
काठमाडौं । हरेक वर्ष लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, विकास खर्च हुन नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउन साँसदहरुले आग्रह गरेका छन् । संसद्को शनिबारको बैठकमा उनीहरूले राम्रा कार्यक्रम राखेर ल्याइने बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदा त्यसको कुनै प्रभावकारिता नरहेको भन्दै कमजोरी सच्याउँदै यथार्थवादी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । गत वर्षको गोरखा भुइँचालो र भारतको अघोषित..
सत्ता फेरिने 'हल्ला'ले बजेटको तयारी गरिरहेका कर्मचारी तनावमा
मंगलवार, बैशाख २१, २०७३ साल
काठमाडौँ। नयाँ संविधानको उत्साहमा सरकार यस वर्ष साविकभन्दा छिटो वार्षिक बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेट बनाउन व्यस्त अधिकारी भने दिनहुँ सरकार परिवर्तनको ‘हल्ला’ले तर्सन्छन्, आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन्। किनकी, छिट्टै सरकार फेरिए उनीहरुलाई कम्तीमा चौथाइ काम दोहोरो पर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउँदो जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी उनीहरु दिनरात खटिइरहेका छन्..
बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति सार्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र दिवस र बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन जुध्ने भन्दै बजेट पेश हुने मिति सर्न सक्ने बताएका छन् । सरकारले जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने बताएको थियो तर सोहि दिन गणतन्त्र दिवस परेकोले मिति सर्न सक्ने विचार राखेका हुन् । गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पनि संविधानमा नै तोकिएकाले..
राजनीतिपछि निजी क्षेत्रको मुख्य समस्या पूर्वाधारको कमी
सोमबार, बैशाख १३, २०७३ साल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ संविधान जारी भएपछि जारी हुन लागेको बजेटलाई निजी क्षेत्रले विशेष महत्वका साथ हेरेको बताएका छ । परिसंघले राजनीतिपछि निजी क्षेत्रको मुख्य समस्या पूर्वाधार भएको बताएको छ । परिसंघलेको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँग आगामी बजेटका लागि सुझाव पेश गर्दै उद्योग व्यवसाय जटिल अवस्थामा रहेको भन्दै संविधान जारी भएको अवस्थामा अब आम जनताको चाहना भनेको उद्योग..
स्थानीय पूँजीगत खर्चको प्रगति निराशाजनक
सोमबार, बैशाख ६, २०७३ साल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति समीक्षाको चित्र उत्साहजनक नभएको हुँदा वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अब चनाखो हुन कार्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन । स्थानीय विकास मन्त्रालयको आव २०७२÷७३ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवम मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुस्, प्रगति उत्साहजनक नभएपनि निराशा..
Results 1679: You are at page 55 of 56